October 2019 – ၀ီရသူ
ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးပါ။ မပေးနိုင်ရင် ရောဂါအတွက် အချိန်လည်းပေးရမယ်။ ငွေလည်းပေးရမယ်။ အလှလည်းပေးရမယ်။ ဘ၀လည်းပေးရမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အသက်လည်းပေးရပါလိမ့်မယ်။ ၀ီရသူ(မစိုးရိမ်) 15.10.2019 PM 7:07 “တဈခုခုတော့ပေးရမယျ” ကနျြးမာရေးအတှကျ အခြိနျပေးပါ။ မပေးနိုငျရငျ ရောဂါအတှကျ အခြိနျလညျးပေးရမယျ။ ငှလေညျးပေးရမယျ။ အလှလညျးပေးရမယျ။ ဘဝလညျးပေးရမယျ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အသကျလညျးပေးရပါလိမျ့မယျ။ ဝီရသူ(မစိုးရိမျ) 15.10.2019 PM 7:07
ပညာရေး အကယ်ဒမီတွင် ယခု စာသင်နှစ်၌ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုရန် တက်ရောက်သင်ကြားနေသူ ၁၇ဝ ဦးရှိသည်။ပညာရေးအကယ်ဒမီ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ များသည် တစ်ရက်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဘုရား ရှိခိုးခြင်း၊ စာပေသင်ကြားခြင်း၊ စာပြန်စာအံ ရခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဝေယျာဝစ္စ ဆောင်ရွက်ရခြင်းတို့ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ကြရသည်။ ထို့ပြင် မင်းကွန်းဒေသရှိ တန်ခိုးကြီး ဘုရားများ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မှုကို ဥပုသ် နေ့တိုင်းပြုလုပ် ကုသိုလ်ယူကြသည်။ ပညာရေးအကယ်ဒမီ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နံနက်နှင့် နေ့လည်ပိုင်းတွင် ယဉ်ကျေးလိမ္မာနှင့် ဓမ္မစကူးလ် သင်ခန်းစာများ ...
လူငယ်ထူးချွန် ဆုနှင့်အတူ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် ပညာရေး အကယ်ဒမီတွင် အကူဆရာမ အဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ မယှဉ်သက်ခိုင် (မြောင်မြို့)အား ဂုဏ်ပြုဆုငွေကျပ်ရှစ်သောင်း၊ ပထဝီဝင်နှင့် သမိုင်း နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးရရှိပြီး လူငယ်ထူးချွန်ဆုနှင့်အတူ ပညာရေးအကယ်ဒမီ အကူဆရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် မောင်ဇော်မျိုးနိုင်(ပင်လည်ဘူးမြို့)အားဆုငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်နှစ်သိန်းငါးသောင်း၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သမီးကောင်းရတနာဆု ရရှိကြသော လဟယ် မြို့နယ် ဆပ္ပလော်ကျေးရွားမှ နာဂတိုင်းရင်းသူများ ဖြစ်ကြသော မကျိမ်ခါလုံ၊ မစစ်မော်သိုက်၊ မထန်ပေ၊ မကျနွေပုံတို့ လေးဦးအား တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် နှစ်သောင်းခွဲစီဖြင့် စုစုပေါင်းဆုငွေ ကျပ်တစ်သိန်း၊ ရိုးသား ...
ဆက်လက်၍ ကရင်ပြည်နယ်မှ ကျောင်း လာတက်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေး မအေ မီမီဟန် (အဋ္ဌမတန်း)က အင်္ဂလိပ်စကားပြော ထူးချွန်ဆုရရှိခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပီသကြည်မြစွာ ပြောကြားသွားသည်။ ထူးချွန်ဆရာဆုရ ဆရာ ဦးအေးမြင့်နိုင်နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအား ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြိုးစား ဖြေဆိုခဲ့ပြီးနောက် ပညာရေးအကယ်ဒမီတွင် တက်ရောက်သင်ယူ ဖြေဆိုချိန်ကြမှ ဂုဏ်ထူးတစ်ဘာသာ(ဇီဝဗေဒ)ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သူ မခင်ချိုသက်တို့က ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားကြသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံတိဋ္ဌတုသုံးကြိမ် ရွတ်ဆို၍ ဆုပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးသည်။ ဆက်လက်၍ အခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်း ...
မင်းကွန်း အောက်တိုဘာ ၁၄စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ်မင်းကွန်းတောင်ရိုး ဓမ္မစေတီကျောင်းတိုက်ရှိ ပညာရေးအကယ်ဒမီစင်တာ၏ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ည ၇ နာရီက အဆိုပါကျောင်းတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသည်။ မန္တလေးမြို့ ဒက္ခိဏာရာမ ဘုရားကြီးတိုက်ဇေယျာရွှေမြေကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုသလ(ပါဠိပါရဂူ) မှ ဆုပေးသြဝါဒစကား မြွက်ကြားတော်မူရာတွင် ပညာကို ကြိုးစား သင်ယူရန်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်း စိတ်ဓာတ် မွေးမြူရန်၊ အနစ်နာခံကာ မျိုးဆက်သစ်များ တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်၊ အနာဂတ်ကာလတွင် ပုခုံးပြောင်းတာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး ဆည်းပူးလေ့ကျင့်ရန်၊ ကျောင်း၏ ...
ဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးလက်ထက်မှာမှ ဒီမိုကရေစီ နောက်ပြန်လှည့်သွားတာ ဘာကြောင့်လဲ? လူ့အခွင့်အရေးနတ်သမီးလက်ထက်မှာမှ မလွတ်လပ်တော့တာ ဘာကြောင့်လဲ? တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနတ်သမီးလက်ထက်မှာမှ တရားရေးမဏ္ဍိုင် ပိုယိုင်လာတာ ဘာကြောင့်လဲ? ငြိမ်းချမ်ရေးနိုဘယ်လ်ဆုရှင်လက်ထက်မှာမှ အရင်လောက်တောင် မငြိမ်းချမ်းတော့တာ ဘာကြောင့်လဲ? လူထုခေါင်းဆောင်လက်ထက်မှာမှ လူထု ခေါင်းမထောင်နိုင်တော့တာ ဘာကြောင့်လဲ? ဒုတိယဘုရားသခင်လက်ထက်မှာမှ ပြည်သူတွေဆင်းရဲတွင်း ပိုနက်ကုန်တာ ဘာကြောင့်လဲ? ပြည်ထောင်စုမိခင်ကြီးလက်ထက်မှာမှ ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားတွေ သွေးကွဲကုန်တာ ဘာကြောင့်လဲ? အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လက်ထက်မှာမှ အတိုက်အခံလုပ်ခွင့်မပေးတော့တာ ဘာကြောင့်လဲ? ဗိုလ်ချုပ်သမီးလက်ထက်မှာမှ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းစဉ် ပျောက်သုဉ်းကုန်တာ ဘာကြောင့်လဲ? တပ်မတော်ဖခင်ကြီးရဲ့ သမီးလက်ထက်မှာမှ တပ်မတော်သားတွေ အနှိမ်ခံနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ? ...
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ ဓမ္မစေတီကျောင်းတိုက်၊ ပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်း ရေအလှူတော်အတွက် ကောလင်းမြို့၊ နိဗဒ္ဓပုညာကာရီ ဆွမ်းကပ်အဖွဲ့မှ လျှပ်စစ်မီးအတွက် အလှူငွေ ၁၀၀၀၀၀ိ (တစ်သိန်းကျပ်) လှူဒါန်းပါသည်။ (14.10.2019 အလှူရှင် ဆရာတော်ဦးနာဂိန္ဒာလင်္ကာရနှင့်အတူ အနုမောဒနာပြုကြကုန်သော ပရိသတ်အပေါင်းအသူတောင်ကောင်းတို့သည် ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးရန်ကွာ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေသော်…ဝ်။ “မုဒိတာရပျဝနျး – ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျးအလှူတျော (၄၂)” စဈကိုငျးမွို့နယျ၊ မငျးကှနျးတောငျရိုး၊ ဓမ်မစတေီကြောငျးတိုကျ၊ ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျး ရအေလှူတျောအတှကျ ကောလငျးမွို့၊ နိဗဒ်ဓပုညာကာရီ ဆှမျးကပျအဖှဲ့မှ လြှပျစဈမီးအတှကျ အလှူငှေ ၁၀၀၀၀ဝိ (တဈသိနျးကပျြ) လှူဒါနျးပါသညျ။ (14.10.2019 အလှူရှငျ ...
အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ အစိုးရတစ်ရပ်လုံးမှာ ကြီးလေးသောတာဝန်များ များပြားသောတာဝန်များ ယူထားပြီး တာဝန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်မျိုး တာဝန်ခံဖြေရှင်းမှုမျိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ အပြောသမားသက်သက်ကြီးပါ။ ဝီရသူ(မစိုးရိမ်) 8.10.2019 AM-8:30 “တာဝနျသာယူထားပွီး တာဝနျခံမှု လုံးဝမရှိတဲ့ မွနျမာ့ခေါငျးဆောငျ” အောငျဆနျးစုကွညျဆိုတာ အစိုးရတဈရပျလုံးမှာ ကွီးလေးသောတာဝနျမြား မြားပွားသောတာဝနျမြား ယူထားပွီး တာဝနျနဲ့ထိုကျတနျတဲ့ ဆောငျရှကျခကျြမြိုး တာဝနျခံဖွရှေငျးမှုမြိုး လုံးဝ မရှိတဲ့ အပွောသမားသကျသကျကွီးပါ။ ဝီရသူ(မစိုးရိမျ) 8.10.2019 AM-8:30
၀ံသာနုဓမ္မကထိက အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဦးဝီရသူ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအရေးနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူပြီးမြောက် ခရီးရောက်စေခြင်းအကျိုးငှာ မော်လမြိုင်မြို့ ဒေါ်အေးအေးသိန်း(ယွန်းဝတီရွှေဆိုင်)မှ ၃၃၀၀၀၀(သုံးသိန်း သုံးသောင်း)ကျပ်၊ မလုလုဆိုင်(ယွန်းဝတီရွှေဆိုင်)မှ ၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း)ကျပ်၊ မခင်သက်စံမှ၂၀၀၀၀(နှစ်သောင်း)ကျပ်၊ မဆုမွန်သက်မှ ၂၀၀၀၀(နှစ်သောင်း) ကျပ် စုစုပေါင်း ၄၀၀၀၀၀(လေးသိန်း)ကျပ် လှူဒါန်းပါသည်။ (1.10.2019) ယွန်းဝတီမိသားစု အမှူးပြုသော အလှူရှင်မိသားစုများနှင့်အတူ အနုမောဒနာပြုကြကုန်သော ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် ကျန်းမာအောင်မြင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြ ဘေးမခဘဲ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။ ၀ံသာနုဓမ္မကထိက အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)သည် မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်၌ ...
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ ဓမ္မစေတီကျောင်းတိုက်၊ ပညာရေးအကယ်ဒမီကျောင်း ရေအလှူတော်အတွက် စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ ဓမ္မစေတီကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာဂိန္ဒာလင်္ကာရမှ ရေမီးပဒေသာအတွက် အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ိ (သုံးသောင်းကျပ်) လှူဒါန်းပါသည်။ (14.9.2019) အလှူရှင် ဆရာတော်ဦးနာဂိန္ဒာလင်္ကာရနှင့်အတူ အနုမောဒနာပြုကြကုန်သော ပရိသတ်အပေါင်းအသူတောင်ကောင်းတို့သည် ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးရန်ကွာ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေသော်…ဝ်။ “မုဒိတာရပျဝနျး – ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျးအလှူတျော (၄၁)” စဈကိုငျးမွို့နယျ၊ မငျးကှနျးတောငျရိုး၊ ဓမ်မစတေီကြောငျးတိုကျ၊ ပညာရေးအကယျဒမီကြောငျး ရအေလှူတျောအတှကျ စဈကိုငျးမွို့နယျ၊ မငျးကှနျးတောငျရိုး၊ ဓမ်မစတေီကြောငျးတိုကျဆရာတျော ဘဒ်ဒန်တနာဂိန်ဒာလင်ျကာရမှ ရမေီးပဒသောအတှကျ အလှူငှေ ၃၀၀၀ဝိ (သုံးသောငျးကပျြ) လှူဒါနျးပါသညျ။ ...
အမရပူမြို့၊ ကွမ်းဆွဲရပ်၊ ကိုမိုးကို+မခိုင်မာဝင်း၊ သမီး မခင်ဇာခြည်ဝင်း (MK ကျောက်မျက်ရောင်းဝယ်ရေး) မိသားစုတို့က မခိုင်မာဝင်း၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဆရာတော်ဦးဝီရသူအား သင်္ကန်းနှင့် နဝကမ္မ ၅၀၀၀၀၀ိ (ငါးသိန်းကျပ်) လှူဒါန်းပါသည်။ (7.10.2019) အလှူရှင်မိသားစုနှင့်တကွ အနုမောဒနာပြုကြကုန်သော ပရိသတ်အပေါင်းသူတောင်ကာင်းတို့သည် ကျန်းမာချမ်းသာ ဘေးရန်ကွာ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေသော်…ဝ်။ “မှေးနအေ့လှူတျော” အမရပူမွို့၊ ကှမျးဆှဲရပျ၊ ကိုမိုးကို+မခိုငျမာဝငျး၊ သမီး မခငျဇာခွညျဝငျး (MK ကြောကျမကျြရောငျးဝယျရေး) မိသားစုတို့က မခိုငျမာဝငျး၏ မှေးနအေ့ထိမျးအမှတျအဖွဈ ဆရာတျောဦးဝီရသူအား သင်ျကနျးနှငျ့ နဝကမ်မ ၅၀၀၀၀ဝိ (ငါးသိနျးကပျြ) လှူဒါနျးပါသညျ။ ...
၀ံသာနုဓမ္မကထိက အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဦးဝီရသူ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအရေးနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူပြီးမြောက် ခရီးရောက်စေခြင်းအကျိုးငှာ မော်လမြိုင်မြို့ ဒေါ်အေးအေးသိန်း(ယွန်းဝတီရွှေဆိုင်)မှ ၃၃၀၀၀၀(သုံးသိန်း သုံးသောင်း)ကျပ်၊ မလုလုဆိုင်(ယွန်းဝတီရွှေဆိုင်)မှ ၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း)ကျပ်၊ မခင်သက်စံမှ၂၀၀၀၀(နှစ်သောင်း)ကျပ်၊ မဆုမွန်သက်မှ ၂၀၀၀၀(နှစ်သောင်း) ကျပ် စုစုပေါင်း ၄၀၀၀၀၀(လေးသိန်း)ကျပ် လှူဒါန်းပါသည်။ (1.9.2019) ယွန်းဝတီမိသားစု အမှူးပြုသော အလှူရှင်မိသားစုများနှင့်အတူ အနုမောဒနာပြုကြကုန်သော ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် ကျန်းမာအောင်မြင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြ ဘေးမခဘဲ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ။ ၀ံသာနုဓမ္မကထိက အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ အရှင်ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)သည် မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက်၌ ...